Home WARARKA MAANTA Wax kabaro Cuntoooyinka nadiifiya Beerka. iyo dhibaatada dufanka badan .
Beerku waxaa uu ka mid yahay xubnaha ugu muhiimsan ee jirkeenna waxaa uu qabtaa howlo badan; waxaa ka mid ah in uu burburiyo ama jirka ka saaro sunta soo gasha, waxa uu kaalin mug leh ka qaataa shaqada hab-dhiska difaaca, sidoo kale dufanka dheeraadka ah ayaa uu jirka ka saaraa.
4➡️Shaaha cagaaran: Waxaa ku jira maadada “catechins” oo caan ku ah caawinta beerka iyo qashin saaridda. Akhriso Faaidooyinka Shaaha Cagaaran.
Previous articleMADAXWEYNE FARMAAJO OO SHIR UGU BAAQAY MADAXDA DOWLAD GOBOLEEDYADA IYO G/BANAADIR
Next articleObama ayeeyadiis oo ku geeriyootay galbeedka Kenya
Soomaaliya ma deyn baa laga cafiyey? Waa maxayse”Bridge Financing”? Ee Uu...